‘सूर्य ककर्ट राशीमा प्रवेश गर्नु नेकपाको सरकार गोलचक्करमा फँस्नु हो ।’ प्रष्टोलोजिष्ट डा. अभयानन्द सरस्वती « Gajureal
‘सूर्य ककर्ट राशीमा प्रवेश गर्नु नेकपाको सरकार गोलचक्करमा फँस्नु हो ।’ प्रष्टोलोजिष्ट डा. अभयानन्द सरस्वती
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०७५, मंगलवार ०४:०५
आज साउने संकाति । आजकै दिनदेखि सूर्य कर्कट राशीमा प्रवेश गर्छ । सूर्य अर्थात् नेकपाको चुनाव चिन्ह, कर्कट अर्थात् गँगटो । यसको अर्थ हो, नेकपाको सरकारलाई कर्कटबाट अप्ठेरो छ ?
हिजोसम्म सूर्यको अवस्था उत्तरायण थियो । आजदेखी सूर्य दक्षिणाय हुँदैछ । सूर्य पार्टीको सरकारले साउने संक्रान्तिदेखि पौषे संक्रान्तिसम्म आफुलाई दक्षिणाय बनाउनै पर्छ, नत्र नारायण हुने खतरा हुन्छ ।
ककर्ट संक्रान्तिमा दिन छोटा र रात लामा हुन्छन् । यो बेला मन्त्रीहरु चाँडै सुत्ने र ढिलो उठ्दछन् । जसले गर्दा सरकारको काम कहिले जाला घाम हुन जान्छ । अत: उनिहरु ध्यान खान र सुत्नमा भन्दा उठ्न त गर्नमा बढि जानुपर्छ ।
शाष्त्रका अनुसार कर्कट संक्रान्तिमा आसुरी शक्ति सक्रिय हुन्छ । दिन असुरको र रात देवताको हुन्छ । दिनमा गरिएका काम बिग्रने खतरा हुन्छ । त्यसैले दिउँसो सुतेर मन्त्रीहरुले राती सक्रिय हुनु पर्छ । किनभने कर्कट संक्रान्तिमा नराम्रा काम रातीको समयमा हुने गर्दछन् ।
कर्कट संक्रान्तिमा नेतलाई मात्र हैन, हरेक मानिसमा नकारात्मक बिचार बलियो भएर आउँछ । सरकार ढालौं ढालौंजस्तो लाग्छ । बिरोधीलाई पेलौं पेलौंजस्तो हुन्छ । कि त्यो छैन, कि म छैनजस्तो हुन्छ । यो बेलामा हरेकले संम्यमित भएर बोल्नु, काम गर्नुपर्छ ।
श्रावण हरित महिना हो । हरित भनेको हरियो,हरियो भनेको रुख, रुख भनेको नेपाली कांग्रेको चुनाव चिन्ह ! दिन घट्ने र हरियाली बढ्ने भएकाले यसलाई यसलाई सरकार ढाल्न खोजेजस्तो बुझ्नु हुन्न । यो प्रकृतिको सनातन नियम हो भन्ने मान्नु पर्छ ।
कर्कट संक्रान्तिमा धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा दिँदा एकदमै राम्रो हुन्छ । जसरी गंगामायाले मागेको दिंदा सरकारलाई हल्का महसुस भएको छ , त्यसैगरी डा.गोविन्द केसीले के मागेका हुन्, मिल्नेसम्म दिए सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ । मिल्दै नमिल्ने कुरो छ भने कारण सहित जनतालाई सुचित गर्नुपर्छ । अन्योलमा राख्नु हुन्न ।
साउने संक्रान्ति कसैलाई फँसाउने र डसाउने पर्व हैन । यो त सबैलाई नचाउने र हँसाउने चाड हो । गाईजात्राको पूर्व सन्ध्यामा हँसाउने संक्रान्तिको सबैलाई शुभ कामना ।